NHM Construction & Decoration Co.,Ltd. | iMyanmarHouse.com
NHM Construction & Decoration Co.,Ltd.
အထပ်မြင့်တိုက်ခန်း ကြိုပှိုင့် ပရောဂျက်များ။ အဆင့်မြင့် ကွန်ဒို အိမ်ယာများ တာဝန်ယူ တည်ဆောက်ပါသည်။
ဤကုမ္ပဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/nhm-construction-decoration-company-limited
NHM Construction & Decoration Co.,Ltd. မှ ဆောက်လုပ်သော Project များ
Diamond Pyi Thar Yar Residence
Diamond Pyi Thar Yar Residence ကို 12 A, ပြည်သာယာလမ်း၊ ဘောက်ထော် ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် NHM Construction & Decoration Co.,Ltd မှ တည်ဆောက်ထားပါသည်။ Facilities 8.5 Floor, RCC + Car parking with pile foundation 25' 6" × 70' ( 1785 Sqft ) Sharine Living Room Dining Room Kitchen Family Space Lift Generator Transformer CCTV and More Typical Floor Plan Basement Car Parking Plan Location Map
BaHtoo Building (NHM Construction)
အမှတ်(၉၆)၊ ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်းမကြီး (၄၃)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် NHM Construction & Decoration Co.,Ltd မှ PAE ဖြင့် တာဝန်ယူဆောက်လုပ်ပါသည်။ ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ဓါတ်လှေကားပါ တိုက်ခန်းများအား အရစ်ကျပေးငွေစနစ်ဖြင့်ဈေးနှုန်းသက်သာစွာ...
အောင်မြေသာယာ (NHM Construction)
အမှတ်(၃၆၁)၊ အောင်မြေသာယာဘုရားလမ်း (၆)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ NHM Construction & Decoration Co.,Ltd မှ PAE ဖြင့် တာဝန်ယူဆောက်လုပ်သော အောင်မြေသာယာရှိတိုက်ခန်းဖြစ်ပါသည်။ Location Map
Shwe Thit Sar Residence
Shwe Thit Sar Residence ကို အမှတ် (၅၇)၊ သစ္စာလမ်းမ၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် (သဘာဝထိုင်းဆိုင်ဘေးကပ်လျက်ခြံ၊ ဝေဇယန္တာ လမ်းဘက်ခြမ်း) တွင် NHM Construction Co.,Ltd မှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်ပါသည်။ Facilities Buildingtype 8-1/2 RCC, Pile foundation lift Room Size 17'×53'(901 sqft) Master Bed Room (1), Single Bed Room (1) Living Room Dining Room Kitchen Room Common toilet Location Map
632, Waiza Yan Tar Road, Ward 4, South Okkalapa Tsp, Yangon.
NHM Construction & Decoration Co.,Ltd. ၏ ဆကျသှယျရနျ ဖုနျးနံပါတျ